Filoha Rajoelina Andry tao Fianarantsoa: « Haato aloha ny fampidirana mpiasam-panjakana amin’ny sehatra hafa… » | NewsMada
Filoha Rajoelina Andry tao Fianarantsoa: « Haato aloha ny fampidirana mpiasam-panjakana amin’ny sehatra hafa… »
Hentitra ny filoha Rajoelina Andry, manoloana izao fiatrehana ny ady amin’ny Covid-19 izao. Anisan’izany ny momba ny fampidirana ho mpiasam-panjakana. Noferana izany manomboka izao aloha.
Nanapa-kevitra ny filoha fa miato, manomboka izao, ny fampidirana ho mpiasam-panjakana amin’ny sehatra hafa. “Ho lohalaharana kosa ny fandraisana mpiasam-panjakana amin’ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana sy ny mpitandro filaminana”, hoy izy. Nolavin’ny filoha, araka izany, ny fangatahana fampidirana ho mpiasam-panjakana miisa 240 tao amin’ny fiadidian’ny Repoblika.
Hampitomboana ny tetibolan’ny minisiteran’ny Fahasalamana
Nohitsiny fa hafantoka bebe kokoa amin’ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ny eo anivon’ny Paramed, ny mpitsabo sy ireo mpampianatra Fram, ny fandraisana mpiasam-panjakana, araka ny nambarany. “Hampitomboina ihany koa ny tetibola ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka”, hoy izy.
Namarana ny fitsidiham-paritra nataon’ny filoha Rajoelina Andry tany Fianarantsoa ny fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny lohamasinina miisa telo sy “wagon” entina hamelomana ny fitaterana an-dalamby Fianarantsoa – Côte Est (FCE).
Fizahantany sy ny zotra an-dalamby FCE
Efa fampanantenana nataon’ny filoha tamin’ny vahoaka ny faritra Matsiatra Ambony sy i Manakara ao anatin’i Vatovavy Fitovinany ny famerenana ny zotra. “Ankoatra ny fitaterana, ahafahana mampiroborobo ny fizahantany ny famerenana ny zotra”, hoy ny filoha. Nitaingina avy hatrany ny lamasinina ny filoham-pirenena ho fanamarihana ny fanolorana izany lohamasinina izany. Tsy vitan’izany fa mbola hisy koa ny “wagon” hafa ho tonga araka ny nampanantenainy.
Fianakaviana hisitraka 50 000 Ar isam-bolana
Etsy andaniny, nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny tetikasa “Ankohonanana miarina” iarahana amin’ny Fid ny filoha nandritra ny diany tany an-toerana. Miisa 10 307 ireo hisitraka izany fanampiana vola 50 000 Ar izany isam-bolana mandritry ny enim-bolana. Hahazo izany ihany koa ny ao amin’ny distrikan’i Lalangina, ahitana tokantrano 4 753 tafiditra amin’ny tetikasa.